I-GTA 6 IXESHA LOKUGQIBELA? AMARHE MALUNGA NEZINDAWO EZIFIHLAKELEYO KWISIXEKO SOMDLALO KUNYE NOHLAZIYO LWAMVA NJE - IMIDLALO
I-GTA 6 iya kuphehlelela ekugqibeleni. Nangona umphuhlisi weRockstar engakulungelanga ukwabelana malunga nayo okwangoku. Olu luhlu
I-GTA 6 iya kuphehlelela ekugqibeleni. Nangona umphuhlisi weRockstar engakulungelanga ukwabelana malunga nayo okwangoku. Olu luhlu yenye yeemidlalo ezilungileyo kwihlabathi. Sele kuninzi ngamarhe. Amacebo okufumanisa ngaphambili kwayo nayiphi na into enokubakho yePS5 kunye neXbox Series X yokukhutshelwa i-GTA 6. Kubandakanya inyani yokuba iakhawunti esemthethweni yeRockstar Support ixelela abalandeli ukuba bahlale belindele uhlaziyo lwe-GTA 6 kuTwitter.
Obona bungqina buqinisekileyo. Kukho ibango lokuba i-GTA 6, okanye ubuncinci into entsha yokungena kwingqokelela yeGrand Theft Auto, isekuqaleni kokuphuhliswa kude kube ngu-Epreli 2020. Ukongeza, oko kuthetha ukuba isicwangciso sangaphakathi seRockstar somdlalo kukukhulula umdlalo omncinci. Emva koko yisa phambili ngohlaziyo oluqhelekileyo. Oku kuthetha ukuba i-GTA 6 iya kudala kwimpumelelo ye-GTA kwi-Intanethi ngokudibanisa ukhetho oluninzi lwenkonzo. Isenokuba sisakhelo se-GTA Online 2 ngokuthe ngqo.
Ukuhamba okutsha kufile kwi-netflix
Nokuba yeyiphi na indlela, lindela ukuba kukho amarhe ambalwa ajikelezayo kwi-intanethi, athe nabani na angadibana nethiyori ethile yeqela leMidlaloRadar. Ukwanelisa yonke iminqweno yomdlali weqonga, ngezantsi ufumane yonke into oyaziyo malunga ne-GTA 6. Ukusuka kubalinganiswa abaninzi abadlalayo abanokufumana kwiindawo ezinokubakho.
Ngaba kukho isixeko esifihliweyo kumdlalo ozayo we-GTA 6?
Inokubakho! Indoda ebalekayo u-Tim Neff kutsha nje uvuza imifanekiso kwi-Instagram ukuze ayicime kamva. Iakhawunti ke yenziwe yabucala.
Ukusuka kwimifanekiso, sinokubona umntu ombetheyo enxibe isuti ye-mocap ephethe izixhobo zexesha lama-80 ezinje ngesiqhushumbisi esiqhutywa ngerokethi esikhokelele kumarhe.
Abalandeli balindele ukuba imifanekiso yompu ifane nomdlalo. Nangona singenaso isiqinisekiso koku, umntu unokuba nethemba.
Ufika nini umhla wokukhutshwa komdlalo we-GTA 6?
Amaxesha ngamaxesha, iRockstar ixelele abalandeli ungalindelanga i-GTA 6. Kwakukho iindaba zokuba i-GTA 6 izakukhutshwa ebutsheni balo nyaka, ngo-2020. Onke la marhe mvanje adutyulwe.
ULowenstein, oyinxalenye yeenkampani ezininzi zokudlala ezabelanayo ukuba akazukuza nanini na kungekudala . Nokuba kulo nyaka. Oyena mntu nabani na onokuba nethemba lokukhutshwa komdlalo ngo-2021.
Isizathu sokungabikho kohlaziyo lwe-GTA 6 kule minyaka isixhenxe idlulileyo?
Kungenxa yokuba iRockstar ijolise kumgangatho womdlalo, hayi umhla wokugqibela. Ukuba bebezakukhulula, bekuya kuba semva kokuba abaphuhlisi bonelisekile sisiphumo sokugqibela.
Ayothusi. Kukhutshwe i-GTA 6 ubuyele kwi2013 kwaye waphumelela kakhulu. Abaphuhlisi ngebenze icandelo elilandelayo kude kube ngoku ukuba bafuna njalo. Kodwa bakhethe ukungakwenzi. Kwaye siyazibuza ukuba kutheni.
Iinkqubo zikamabonwakude ubhuti omkhulu
Kwakukho neendaba malunga neRockstar ebanga ukubuyiselwa kweerhafu kumdlalo wevidiyo wabo olandelayo abaza kuwusungula. Ngaba le nto ingayingcebiso ye-GTA 6 ezayo kungekudala? Kufuneka silinde kwaye sifumanise! U-2020 utsala ixesha elikhulu kwaye sonke siyayazi loo nto kodwa iqhinga lokuphelisa isiqalekiso lilapha.
Linda nje de kube ngu-2021.
I-monster musume yobomi bemihla ngemihla kunye ne-monster girls season 2
I-mob psycho 100 yenetflix yokuphosa
jujutsu kaisen kwisizini ezayo
Ukuhamba kwemihla yokukhutshwa kwesiqendu esifileyo
ujonge i-3 kwi-amazon prime
sherlock holmes 3 bhanyabhanya